कोठामा ग्यास हिटर बालेर सुत्दा! | पहिलो बोली
कोठामा ग्यास हिटर बालेर सुत्दा!
२०७६ माघ ७, मंगलबार (१ साल अघि)
३८२३ पटक पढिएको
Published on: Tuesday January 21, 2020 (2 years ago)
मकवानपुरको पर्यटकीय क्षेत्र दामनको एक रिसोर्टमा बेहोस भएपछि काठमाडौं उपचारमा ल्याइएका आठजना भारतीयको मृत्यु भएको छ।१५ जनाको समूहमा आएका उनीहरूले दुई कोठा रिजर्भ गरेका थिए। एक कोठामा आठ र अर्कोमा सात जना सुतेका थिए। अर्को कोठामा रहेका भारतीयलाई भने केही नभएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार थाहा नगरपालिका-४ सिमभञ्ज्याङस्थित होटल एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बसेका भारतीय पर्यटक मंगलबार बिहान अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनीहरूमध्ये पाँच जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको थियो। उपचारमा ल्याइएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको बुझिएको छ,’ अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले जनायो ।
अन्य तीन जनालाई लिन पुन: हेलिकप्टर लिन गएको थियो। उनीहरूलाई अस्पताल ल्याउनसाथ मृत घोषणा गरिएको थियो। मृत्यु हुने दुई जना महिला र दुई पुरूष र चार बालबालिका रहेका छन्। मृतक सबैको पहिचान खुलिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू भारतको केरलाबाट आएका थिए। मृत्यु हुनेमा ३८ वर्षीय रन्जित कुमार, ३४ की ईन्द्र कुमार, ३७ का प्रविणकृष्ण नायर, ३२ की सरिया नायर, ५ वर्षका अभी, ७ की अर्चना,५ वर्षका बैशनव र ९ की बन्द्रा छन्।उनीहरू कोठामा ग्यांस हिटर बालेर सुतेका थिए।
उनीहरू निसास्सिएर बेहोस भएको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ।अर्को कोठामा बस्नेले भने हिटर प्रयोग गरे/नगरेको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो।